igbo – Igbo Services
IHE NDI IGBO JI EKPE EKPEMEKPE ,OFUFE NA NWUCHA .
Chigo	 Jun 19, 2022 0
Ha gụnyere ihe ndi a Oji, Ofo na Ogu, na Ikenga. OJI bu mkpuru osisi oji na ami ya.Eji ya ekpeekpere ma ọ bụ ekpe okpukpere chi Igbo,eji ya efe ofufe,a na-ata ya ata,ma werekwa ya na-ele ọbia. Ofo na Ogu bu echiche…
Kedu ihe ọ pụtara bu ndọrọndọrọ okwu Igbo ENWE Eze?
Chigo	 Jun 12, 2022 0
Igbo enwe eze n'aha ya, anaghị ekwu na IGBO anaghi enwe onye ndu (dị ka onye ọchịchị) n'ọtụtụ obodo Igbo. Nnọọ ọ na-ekwusi ike na ọ nweghị onye ndu ndị a họpụtara ka ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze nke ndị Igbo na-ekwe ka ọ were aka…
Kedụ ihe bụ otu Ọgbọ?
Chigo	 Jun 5, 2022 0
Nkea bụ njikọ nke ndị ha nhata ma ọ bụ ihe dị ka otu afọ, na-arụ ọrụ n'ime mpaghara ma ọ bụ mpaghara enyere n'ebumnobi nke mgbanwe/mmepe mmadụ, mkpokọta na nke ọha. ỌRỤ OTU ỌGBỌ Ọrụ ha gụnyere 1) irụ okporo ụzọ, 2) mmezi…
Chigo	 Jun 4, 2022 0
Onye bụ Ụmụada Igbo land? Ụmụada bụ okwu eji eme ihe sitere na okwu igbo abuo umu nke na-asughari n'asusu ndi mmadu na ada nke putara ada nke mbu. Otu a gafere ụmụ nwanyị mbụ, gbakọtakwa ụmụ nwanyị niile a na-esi n’obodo nta ma ọ bụ…
Chigo	 May 1, 2022 0
Ụmụada bụ okwu eji eme ihe sitere na okwu igbo abụọ ụmụ nke na-asụghari n'asusu ndi mmadu na ada nke pụtara ada nke mbu. Otu a gafere ụmụ nwanyị mbụ, gbakọtakwa ụmụ nwanyị niile a na-esi n’obodo nta ma ọ bụ n’ime obodo gbakọọ ọmụmụ ha.
Kedu ihe bụ usoro ezinaụlọ nke Igbo?
Chigo	 Apr 29, 2022 0
Nna bụ onye isi ezinaụlọ anakwere, ezinaụlọ ndị Igbo na-ebikarịkwa n'otu ogige nwere mgbidi, nwere ma ọ dịkarịa ala ụlọ abụọ: otu maka nna na nke ọzọ maka nne (Ejiofor, 1981). Ụmụ nwoke ndị toro eto na-eketa ụlọ nna ha, ebe ụmụ nwanyị na…
Chigo	 Apr 24, 2022 0
Nsibidi bụ ihe nzuzo na-abụkarị usoro ideographic nke e mepụtara n'ebe a na-akpọ ugbu a na ndịda ọwụwa anyanwụ Nigeria. Ọ bụ naanị usoro ederede West Africa nke hieroglyphics na-emetụtaghị. Ọ dị omimi nke ukwu.
June 12: Ọchịchị onye kwuo uche ya bụ mgba maka obodo ka mma…
Isiokwu dị mkpa254